देशकै जेष्ठ जनप्रतिनिधि बजेट माग्न हुम्लाबाट काठमाडौँमाः भन्छन्- गाउँमा सिंह गए, दरबार गएन हजुर — OnlineDabali
काठमाडौँ । हुम्लाको सर्केगाडा गाउँपालिकाको वडा नम्बर ८ का अध्यक्ष ट्यार्‍या रोकाया सम्भवत देशकै जेष्ठ जनप्रतिनिधि हुन् । उनी अहिले ७३ वर्षका भए । केही दिनदेखि रोकाया काठमाडौँमा आएका छन् । घुम्न नभएर विकासका योजना र बजेट माग्न रोकाया काठमाडौँ आएका हुन् । आफैले ‘गाउँगाउँमा सिंहदरबार’को नारा दिएर चुनाव जितेका रोकाया सिंहदरवार खोज्दै काठमाडौँ आईपुगेका हुन् । उनले एक झोला फाइल बोकेका छन् ।
उमेरले ७३ बसन्त पार गर्नै लागेका रोकाया स्थानीय पहिचानसहित संवाद डबलीमा आइपुगे । खुट्टा लगाएका पलाष्टिकका चप्पल निकालेर सोफामा बसेपछि रोकाया केही सुस्ताए । चिया र विस्कुट खाईसकेपछि हामीले सोध्यौं, काठमाडौँ किन आउनु भयो नी ? उनले मार्मिक उत्तर दिए, “गाउँगाउँमा सिंह गए तर दरबार गएन हजुर । त्यही दरबार खोज्न आएँ ।” हाम्रो दोस्रो प्रश्न थियो, चुनावमा तपाईँहरुले नै भनेको होइन त ? उनले स्थानीय भाषामै भने, “त्यही भन भने ध्यौं, हामीले पनि जनतासँग भन्यौं, अहिले जनता तमीले टोट्यौं भन्न लागे ।” उनले चुनावको बेलामा भनेअनुसार काम गर्न नसकेको स्वीकार गरे । उनले आवश्यकता धेरै भएको तर नयाँ आर्थिक वर्षको लागि भन्दै आफ्नो वडामा २६ लाखको सिलिङ पुगेको बताए । पहिलाको गाविसलाई अहिले वडा बनाइएकोले उक्त बजेट अपुग भएको रोकायाको भनाई छ ।
हाम्रो तेस्रो प्रश्न थियो, खासमा के माग्न आउनु भएको हो ? उनले सरसरी भने, “हाम्रो वडामा धेरै हामी ब्यासी (जनजाति) र दलित छौँं । हाम्रा केटाकेटीको लागि भनेर गाउँमा २०२८ सालमा स्कुल स्थापना गरेँ । सरकारसँग मागियो तर नदिएपछि लडाई जारी राख्दै नीजि स्रोतबाटै भएपनि स्कूल सुरु गरियो । पछि २०३२ सालमा स्वीकृत भयो । त्यसपछि हाम्रा केटाकेटीले गाउँमा पढ्न पाए । अहिले कक्षा ८ सम्म पढाई हुन्छ । त्यही स्कूलको लागि भवन र खेल मैदानको लागि बजेटको लागि काठमाडौँ आएको हुँ ।” उनी त्यति बेला गाउँ पञ्चालयको प्रमुख थिए । उनले आफूले स्कूल स्थापना गरेपनि त्यहाँबाट हटाउने केही व्यक्तिले षड्यन्त्र गरेको बताए । शिक्षक कोटा र बजेट पनि कटौती गरिएको गर्दापनि गाउँलेहरुले आफ्ना गाँस कटाएर शिक्षकलाई पालेको रोकायाले बताए । पञ्चायतकालमा पनि उनी १५ वर्ष गाविस प्रमुख भएका थिए । त्यति बेला आफ्नै पहलमा स्थापना भएको विद्यालयको भवन र खेल मैदान बनाएर कक्षा १० सम्मको पढाई संचालन गर्ने उनको योजना छ ।
सिंहदरबारबाट सिधै संवाद डबलीमा पुगेका रोकायालाई हामीले विद्यालयको भवनको लागि कोकोसँग भेट गर्नुभयो ? भनेर सोध्यौं । हुम्लाका सांसद छक्कबहादुर लामालाई भेटेर आफ्नो माग राखेको बताए । शिक्षामन्त्रीलाई भेटेर आफ्ना कुरा राखौं भनेर सोही गाउँका स्थानीय तर हाल काठमाडौँ बस्दै आएका लेखक तथा वरिष्ठ पत्रकार डा. दिपेन्द्र रोकायाको सहयोगमा सिंहदरबर पुगे । तर, शिक्षामन्त्री गिरिराजमणी पोखरेले भेट दिएनन् । शिक्षामन्त्रीलाई नै आफ्नो माग राख्ने रोकायाको सपना पूरा हुन सकेन । उनले मागसहित फाइल मन्त्रीको नीजि सचिवालयमा दर्ता गरेर फर्केको जानकारी बताए ।
स्थानीय चुनावमा नेपाली काँग्रेसका उम्मेदवारलाई हराउँदै रोकाया तत्कालिन माओवादी केन्द्रको तर्फबाट निर्वाचित भएका थिए ।
बुढेस् कालमा पनि राजनीति गर्ने रहर किन गर्नु भएको हो त ? भन्ने हाम्रो प्रश्नमा रोकायाले भने, “मैले हुँदैन भनेको हो । तर जनताले मानेन्, एक पटक हुनु भएर हाम्रो लागि काम गर्नु परो भने, जनताकै भावनाअनुसार म तयार भएँ । मैले पञ्चायतकालदेखि जनताको गरेको सेवा गर्दै आएको थिएँ, अब गणतन्त्रमा पनि हुनुपरो भन्ने गाउँलेको कुरालाई काट्न सकिएन ।” उनले आफूले जनताको भवनाअनुसार नै काम गरेको बताए ।
स्थानीयका आवश्यकता धेरै भएपनि आफूले पहिलो शिक्षा र दोस्रोमा स्वास्थ्य राखेको बताउँदै रोकायाले त्यही अनुसार आफ्नै पहलमा स्थापना भएको अंशुवर्मा निमावीको भवन र खेल मैदान निर्माण गरेर घरमै मावि स्तरको पढाई गराउने योजना रहेको बताए । जनयुद्धको बेला पनि रोकायाले स्थानीय स्तरमै ठूलो सहयोग गरेका थिए । उमेर ७३ वर्ष भएपनि फुर्ति र कुराकानीमा जोस भने कुनै युवाको भन्द कम थिएन ।
वडाअध्यक्ष रोकायासँगै काठमाडौँमा आएका छन्, सोही वडाका सदस्य धनबहादुर रोकाया । उनीहरु एउटै बाजेका सन्तान हुन् । धनबहादुर पनि पञ्चायत र बहुदलीय व्यवस्थामा पनि स्थानीय सरकारको जिम्मेवारी समालिसकेका थिए । त्यसैगरी जनयुद्ध कालमा स्थानीय जनसरकारमा पनि रोकायाले जिम्मेवारी पूरा गरेका थिए । उनले आफूले जनयुद्धमा माओवादीले सिकाएजस्तै गरी अहिले जनताको हितमा काम गर्ने सोँच बनाएका छन् । “हामीलाई अरु कुनै स्वार्थ छैन, मात्र गाउँको विकास र जनताको सेवा कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने मात्रै छ । जसरी तीनओटै व्यवस्थामा हामीलाई जनताले विश्वास गरेका छन्, त्यसलाई ध्यानमा राखेर काम गरिरहेका छौं” धनबहादुरले अनुभव सुनाए । उनले जनताको आवश्यकता र चेतना हिजोभन्दा आज निकै बढेकोले त्यसलाई पूरा गर्ने गरी काम हुन नसकेको बताए ।
बजेट माग्न, गाउँपालिका र प्रदेश नगएर किन काठमाडौँ आउनु भयो भन्ने हाम्रो प्रश्नमा धनबहादुरले भने, “गाउँगाउँमा सिंहदरबार भनियो तर नारामात्रै गाउँ गयो तर सिंहदरबार जान सकेको छैन, सिङ भएका सिंह गएका छन् दरबार यतै छ, उनीहरु पनि यता आउन बाध्य छन् ।” वडापालिकाले शिक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको कारण विद्यालय भवन निर्माणको लागि पहल थालिएको बताए । जनक ऐडीलगायत केही व्यक्तिहरुले गाउँको उक्त विद्यालय त्यहाँबाट हटाउन लामो समयदेखि प्रयास गरेको बताए ।
“पञ्चायतकालमै लडेर ल्याएको स्कूल त्यहाँबाट हटाउन जनक ऐडीसहितका केही व्यक्तिहरुले निकै खेल खेले । विद्यालयमा आएको दरबन्दी कोटा समेत काटे । विरोध गर्दा यी माओवादी हुन् आगजनी गरेको भन्दै झुट्टा मुद्दा लगाए जेल समेत हाले” धनबहादुरले भने । उनले विद्यालयपछि स्वास्थ्य सम्बन्धी योजना पनि बनाइएको बताए । गाउँका जनतालाई स्वास्थ बनाउने योजना रहेको जानकारी दिए ।
जनयुद्धमा पनि स्थानीय जनसरकार संचालनको अनुभव भएका धनबहादुरले भने, “त्यो बेला धेरै जनतासँग भनिएका कुरा धेरै पूरा हुन बाँकी छन् । समयले आवश्यकता र आकांक्षा पनि बढाएको छ । बजेट सिमित छ ।” देश संघीयतामा गएपनि बजेट माग्दै काठमाडौँ आउनु पर्ने बाध्यता नहटेको दुखेसो गरे ।
काठमाडौँमा एक हप्तासम्म बस्ने योजना रहेको बताउँदै धनबहादुरले त्यसपछि प्रदेश सरकारसँग बजेट माग्न जाने र त्यसपछि घर फर्किने बताए ।
यसअघि वडाअध्यक्ष रोकायाले त देउताको पनि सेवा गर्नुपर्ने भन्दै चाडै फर्किनु पर्ने बताएका थिए । उनले दुबै हात टाउकोमा लिँदै भनेका थिए, “देउता पनि हजुर, यसको पनि सेवा गर्नुपर्छ । चाँडै फर्किनुपर्ने छ ।” हुम्लाबाट ठूलो लगानी र अपेक्षासहित काठमाडौं झरेका रोकाया केही निरास भएका छन् ।